Iindaba - I-ALLWIN isebenza nabathengi ngamaxesha anzima e-COVID-19
I-ALLWIN isebenza nabathengi ngamaxesha e-COVID-19 anzima
Ekuqaleni kuka-2020, safumana ubhubhane okhethekileyo-i-COVID-19. Imizi-mveliso emininzi kuye kwafuneka iyeke ukuveliswa phantse iinyanga ezimbini. Emva kwamaxesha anzima, siye saqala imveliso eqhelekileyo. Nangona kunjalo, intsholongwane iya isiba mandundu kwihlabathi liphela.
Omnye wabathengi bethu ovela eTrinidad, besisebenza ngaphezulu kweminyaka eli-10, wabeka i-odolo ngoDisemba 2019, kwaye ngo-Matshi safumana i-imeyile evela kuye, imeko eTrinidad imbi kakhulu, Uqoqosho luchaphazeleke kakhulu I-COVID19. Ukujonga ukuba intsebenziswano yethu yomelele kakhulu, siye sagqiba kwelokuba simise elinye ixesha lokuhambisa. Sixelele umthengi ukuba i-ALLWIN iya kujongana nale ngxaki kwaye yoyise imeko enzima kunye naye. Emva kokugcina iimpahla kwigumbi lethu lokugcina phantse iinyanga ezi-6, sazisa iimpahla kwinyanga ephelileyo kwaye safumana intlawulo ekupheleni kukaSeptemba.
Nangona i-COVID-19 isachaphazela amazwe kwihlabathi liphela, imeko iya isiba mandundu nangakumbi. Siqinisekile ukuba sizoyisa le ntsholongwane, kwaye i-ALLWIN iyakwamkelwa kwaye ithandiwe ngabathengi abaninzi.